Wiricheya Kugara Matipi
Kuwana iyo chaiyo chigaro pamutsago enyu wiricheya ichawedzera zvakanyanya kugadzikana iwe kunyanya kana kushandisa chigaro chako kwenguva yakareba. Cushion nyaradzo haisi iyo yega chinhu chekufunga nezvayo. Heano zvimwe zvekuwedzera zvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo kana zvasvika pakunyaradzwa uye kuchengetedzeka.
Izvi zvakakosha nekuti nekuti kana yakatetepa, char inenge yakanyatso kukwana uye inogona kukonzeresa kukuvara kweganda nekuda kwekuramba uchikwiza pakati wiricheya uye ganda. Kana iyo wiricheya rakapamhamha zvakanyanya, zvinogona kukonzeresa kusagadzikana kwemuzongoza.
Kufambisa iyo wiricheya nemaoko ako angave akaoma sezvo zvingave zvakaoma kusvika mavhiri. Izvo zvinogona zvakare kukonzera kushushikana kwemaoko.
Iyo yakawedzera chigaro inorema cheya uye inogona kuita kuti zvinyanye kuoma kutakura kunyanya kana kushandisa motokari. Hupamhi mavhiripu vane yakafara kutenderera nharaunda zvinoreva kuti ivo vanonetsa kufambisa munzvimbo diki.
Kupinda nepasuo rakamanikana kana kupfuura nenzira dzakasimba kungave kwakaoma kunyange kusabvira. Iwe unofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana kuitira kuti iwe ugone kupfeka gobvu dzakakora mbatya uye usasvinire muchigaro.
Uku ndiko kuyerwa kubva kumberi kwechigaro kusvika kuseri kwechigaro. Iyo yakanakira chigaro kudzika ndeye 3 kusvika 4 masentimita kubva kumashure kwemabvi. Ita shuwa kuti makumbo ako akaenzana kune pasi uye iyo wiricheya chigaro chinofanirwa kutsigira ruzhinji rwepazasi pechidya chako.
Kupfupisa kudzika kwechigaro kunogona kukonzera kurasikirwa kwekugadzikana uye kunetsekana kwakanyanya kunogona kuitika. Kudzika kwakanyanya kureba kunogona kukonzera kutsvedza uko kwakaipira musana.
Bhandi repachigaro pa wiricheya inogona kubatsira zvikuru. Kungofanana neunosunga bhandi muchigaro mumotokari yako nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza, iwe unofanirwa kufunga zvakanyanya kuita zvakafanana mu wiricheya kudzivirira zvakakomba kuipa.
Iwe unogona kugurwa kubva kuvanhu vanofamba pamberi pako; unogona kurovera muchinhu kana ungatomira nekukasira.
Chero zvazvingaitika, bhandi repachigaro rinokutadzisa kubva kutsvedza pachigaro chako. Ivo vanowanzo kuuya nemagetsi emacheya uye kune mamwe emanyorerwo mavhiripu izvo zvinouya navo futi.